ယုံကြည်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းအပေါ်လှေကားခ | Apg29
အတူစတင်, သင်တို့ကိုငါသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေသင်အားဂုဏ်ပြုချင်! ဒါဟာမဆိုလူအားဖွစျနိုငျကွောငျးအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ ယေရှုသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသင်တို့အဘို့အသစ်တစ်ခုအလွဘဝစတင်ခဲ့သည်။
ပင်အရှည်ဆုံးခရီးတစ်ခြေလှမ်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလမ်းလျှောက်မှကြွလာသောအခါဤသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ ယခုသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားဘို့, ဤသူသည်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၏ဘုံတှငျယခုအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ယခုမူကားကအားလုံးကိုစတင်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ပို. ပင်သညျယရှေုကိုသိရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ၏စဉ်းစားပါ: သူသည်ကောင်းစွာအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်မဟုတ်လော သူကို run ဖို့စတင်ခုန်, ကခုန်များနှင့်ချက်ချင်းပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးကို run မရနိုင်မလဲ? သူကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်အဘယ်သူမျှမပေမယ့်, သူကသူ့အဘို့အချိန်ရသောအခါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးကို run နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကိုစတင်ပါ။
ဤသည်စာအုပ်ငယ်ကိုယုံကြည်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျယခုခရစ်တော်အားမွေးဖွားကြောင့်သင်တို့ကိုအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးမရှိကြပေ။ ကလေးသူငယ်အခကိုဆင်းကျရောက်နှင့်သင်တာမျိုးတူသောဒါဟာသင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဖွင့်မပေးပါဘူး။ တက် Get ယုံကြည်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ယေရှုနှင့်အတူသွား,
ရောမအခနျးကွီး 10 နဲ့ကျမ်းပိုဒ်9၌ဤ says:
"သင်ယရှေုသညျမိနျ့တျောမူ၏ကြောင်းကိုသင်၏နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံနှင့်ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူကြောင်းစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျှင်, သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ "
"ခံစား" အကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကမျြးစာကိုတကယ်အဘယ်သို့မိန့်တော်! သငျသညျထို့နောက်သူကယုံကြည်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်များအတွက်ကောင်းစွာသွားပါလိမ့်မယ်ဒီရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်အတူကပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တောင်တက်တွင်, သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုပြန်ဆုတ်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုအခါကယေရှုအားကပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ပြုလျှင်ကြောင့်လမ်းယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲဖြစ်လာသွားလိမ့်မည်။
လူတွေလာသောအခါစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ယရှေုထံမှထွက်ပြေးသူတို့ထဲမှတစ်ဦး။ ဒုတိယသညျယရှေုမြို့သို့ပြေးကြလော့။ ကွာသညျယရှေုကနေပြေးနှင့်ထိ မိ. လဲကွာယုံကြည်ခြင်းနှင့်မဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်မှာရှိအစားယေရှုအားထွက်ပြေးလာသောနှင့်ယုံကြည်ခြင်း၌အားကြီးသောဖြစ်လာသည်။
ကလေးလမ်းလျှောက်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မည်သည့်အခါသူကကျရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သူလဲအနည်ထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သူနေဆဲ, ခေါင်းမာဖြစ်တက်ရ, ထပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းဥပဒေသငျသညျရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာသင်ယုံကြည်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ကျဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုမြို့၌အိပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်စွာခဲ့ကြပါဘူး။ ထ Get ခွင့်လွှတ်အတှကျဘုရားသခငျကိုမေးမွနျးနှငျ့ယရှေုနှင့်အတူပေါ်ရွှေ့။
အသစ်တစ်ခုကိုယုံကြည်သူအဖြစ်နှင့်သင်ဆက်ဆက်အကောင်းမဟုတ်ကြောင်း, မိမိအိတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်အမှုအရာရှိသည်။ ဤကိစ်စတှငျကအားလုံးကိုလက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျယရှေုကိုကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းရပါမည်။ အမှုအရာကိုသူကအချိန်အခါဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်ကိုသင့်အိတ်၌ကောင်းသောမရှိကြပေ။ အရာအားလုံးကိုသင်ကသညျယရှေုကိုလက်ခံသည့်အခါမှာတခါပျောက်ကွယ်သွားမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအခြားစကားလုံးများအတွက်သန့်ရှင်းဟုခေါ်တွင်သောဤဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကိုလည်းရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတစ်ကြီးမားကျယ်ပြသံသယတိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်အသစ်သောယုံကြည်သူများအတွက်အလွန်ဘုံကြောင်းကိုဤအခြေအနေတွင်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, မသာဘုံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤမျှအစဉ်အမြဲပါ! ဒါဟာအစောပိုင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာမဝင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါစေ!
သူကအစားအသောက်မရပါဘူးဆိုရင်သူငယ်သေလိမ့်မယ်။ ထိုနညျးတူကသင်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝိညာဉ်အစာလိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကမရကြဘူး, သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာအာဟာရချို့တဲ့ဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်ရေးမှာသေဆုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဘယ်လိုအစားအစာရပါသလဲ? သငျသညျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအစားအစာရရှိနိုင်သည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုတွေထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်နေဖွငျ့ဤလုပ်ပါ။ သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်ရှုဖို့သစ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါ (သမ်မာကမျြး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော) သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်စတင်နှင့် Mark ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဖတ်မှအကြံပြုပါသည်။ ဤသည်စတင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်သင်တန်း၏, တစ်ခုလုံးကျမ်းစာဖတ်မှဆက်လက်။
ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကနေကျမ်းစာဖတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုရှိပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုကိုယုံကြည်သူအဖြစ်, ဒီလုပ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း (သမ်မာကမျြး၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်) ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏အခနျးမှာဆက်လက်နှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖတ်ရှုပါ။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားမည်ကိုမြင်လိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသဖြင့်အစားအစာကိုမရနိုငျသညျ! သင်တို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာသညျယရှေုဟောပြောတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသွားနေဖြင့်အရကဘာလဲ! ငါသည်သင်တို့ကိုအသကျရှငျရှိရာနေရာဒေသရှိခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုဆက်သွယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ငါအဆက်အသွယ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်ပျြောရှငျနိုငျဒီတော့သင်ကဘုရားကျောင်းမသွားပါစေနဲ့။ သို့မဟုတ်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခရစ်ယာန်မှဖွင့်ပါ။ ဒီတော့သူကဆက်ဆက်သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
စည်းဝေးပွဲသင်ယူဖို့ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါကသင်မည်သို့သိနိုင်မည်လဲ? - သခင်ယေရှုခရစ်ဝန်ခံ, သင်စိုးရိမ်မရထားဖို့လိုပါမယ်။
သင်နှင့်အတူဆက်ဆံချင်တယ်။ သူသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်လိုသည်နှင့်အသငျသညျသူ့ကိုစကားပြောလာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဤသည်ကအရေးကြီးတယ်။
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုချစ်ကြလျှင်, သင်တို့တွင်သင်တန်းပြုလုပ်သူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အားထုတ်စေပါဘူး။ ထိုနညျးတူယရှေုသညျနှငျ့အတူရှိ၏။ သင်သည်မည်သည့်ဘာသာရေးကြွက်သားတင်းမာလာနိုင်ဒါမှမဟုတ်တင်းမာမှုရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်သည့်သဘာဝဖြစ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူ့ကိုပြောဆိုပါ။ သင်ကရှိသည်နှင့်သခင်ဘုရားနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ သူ likes ကြောင်း။
ငါကဒီမှာအားလုံးဆုတောင်းပဌနာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုအပေါ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တက် ယူ. မသွားနိုင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းအရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုအားပေးချင်: ဘုရားသခင်သည်သင်ဆုတောင်းရန်လိုသည်။ သူကကမျြးစာ၌ဤအကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါ်ဆိုသည်။
အခနျးကွီး 21 နှင့်ကျမ်းပိုဒ် 22 ခုနှစ်တွင်, ယရှေုမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ဤ says:
"သင်ပြုသောပဌနာအတွက်တောင်းသမျှသင်ထင်သကဲ့သို့, ရကြမည်။ "
သငျသညျယရှေုအားဆုတောငျးနိုငျ, ဒါပေမယ့်လည်းယေရှုယေရှုရဲ့နာမတော်၌ခမည်းတော်ထံသို့တိုက်ရိုက်ဆုတောင်းဖို့အားပေး။ ဆုတောင်းခြင်းအဖြေကိုဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း, ထိုသို့သောဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော, ယရှေုသယောဟနျသမျြးအခနျးကွီး 16 နဲ့ကျမ်းပိုဒ် 23 ခုနှစ် says:
"ထိုနေ့တွင်သင်သည်တစုံတခုကိုအကြောင်းငါ့ကိုမမေးပါလိမ့်မယ်။ အာမင်အာမ, ငါအမှနျဆိုသညျကား: သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမှီခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှ, သူသည်သင်တို့ကိုငါပေးမည် "။
သူသည်သင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူကြောင်းကိုဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ယရှေုသညျသင်တို့အဘို့ပြုတော်မူပြီအရာကိုဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ သူကွယ်လွန်သွားခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့။ သူသည်ယနေ့အသက်ရှင်လျှက်ဖြစ်ပြီးသူအားလုံးသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဖြစ်သည်။ ထို့နောက်
သငျသညျလိုက်တဲ့အခါမေးသငျ့သလဲ အဖြေကိုသင်ပထမဦးစွာသက်သာလောနိတ်အခန်း5နဲ့ကျမ်းပိုဒ် 17 မှာသမ်မာကမျြး get:
တမန်တော်များတွင်အခန်း2နဲ့ကျမ်းပိုဒ် 38 ပတေရုသကိုသူတို့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဘယျသို့ကလူတုံ့ပြန်:
"ပတေရုသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်နောင်တရနှငျ့ယရှေုခရစျ၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရ 'ပြန်ဖြေသည်။ ထိုအခါသင်တို့သည်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောခံရကြလိမ့်မည်။ ' "
လူတိုင်းပြီးတော့နောင်တရလိမ့်မယ်, လူအပေါင်းတို့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြကုန်အံ့သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ဆောင်အဖြစ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး: သင်ဤသို့ပြုသည့်အခါသင်တို့သည်လည်းကတိရှိသည်! လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်နောင်တတရား, ဗတ္တိဇံနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်: ကျမ်းစာခေတ်တွင်ဤအရာသုံးခုကိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ပါဝင်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြကုန်အံ့သငျ့သညျ။ သင်သည်မည်သည့်ဘုရားကျောင်းနာမ၌သင့်ကိုငါမပေးဗတ္တိဇံ, ဒါပေမယ့်သူကယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်၌တည်ရှိ၏။ တဖန်သင်တို့မဟုတ်သလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာမှမှဗတ္တိဇံကို, ဒါပေမယ့်ယရှေုသညျဆဲပါပဲ။
သငျသညျကမျြးစာကိုရောမအခနျးကွီး6နှင့် 3-4 ကျမ်းပိုဒ်ကပြောပါတယ်အဖြစ်ထို့နောက်တက်နောက်တဖန်လုံးဝရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုနှင့်နေကြသည်:
"သင်ခရစ်တော်ယေရှုသို့ဗတ္တိဇံကိုပါပြီခဲ့သူကြှနျုပျတို့အားလုံးသူသေဆုံးသို့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရကြောင်းမသိကြသလော ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သေခြင်းတရားသို့ဗတ္တိဇံအားဖြင့်နေသောခေါင်းစဉ်: ခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်သကဲ့သို့သူနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြှနျုပျတို့လညျးအသစ်တစ်ခုဘဝအသက်ရှင်မည်အကြောင်း "။
ဗတ္တိဇံတရားကိုသင်ယခုယေရှုအားပိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဝန်ခံသည်။ သင်အမြဲသူ့ကိုပိုင်မှ, ယရှေုခရစျသသို့ဗတ္တိဇံကိုကြသည်! ဗတ္တိဇံတရားကိုသင်ယခုဘုရားသခင်အားနောင်တရကြမယ့်အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
မာကုအခနျးကွီး 16 နဲ့ကျမ်းပိုဒ် 16 ခုနှစ်တွင်, ယရှေု says:
"အကြင်သူသည် ယုံကြည်. ဗတ္တိဇံကိုတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ယုံကြည်သောသူမူကားမပါဘူးအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "
လက်ဆောင်အဖြစ်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောကိုလက်ခံရရှိ! ဒါဟာခြေလှမ်းငါပြီးသားအပေါ်ထိမိပါပြီ။ သငျသညျခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်အသက်ရှင်နေထိုင်နှငျ့ယရှေုကိုသင်မှာထားတော်မူသောအရာကိုလုပ်ဖို့ပါဝါကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းယေရှုနဲ့အတူသင့်ရဲ့နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်အတွက်အကူအညီလိုပါလိမ့်မယ်။
ယောဟနျသမျြးအခနျးကွီး 14 အခနျးငယျ 16-17, ယရှေုသညျဤ says:
"ထိုအခါသူကကမ္ဘာကြီးကိုမခံမယူနိုငျသော, သငျသညျအမှနျတရား၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်လိုက်နာစေခြင်းငှါ, ငါသည်ခမည်းတော်ဆုတောငျးမညျ, သူသည်သင်တို့ကိုအခြားပဇ်ဈာယျပေးရကြမည်။ ကမ္ဘာကြီးအဘို့သူ့ကိုမြင်သည်မဟုတ်, သူ့ကိုသိတယ်။ သူသည်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်နေဆဲနှင့်သင်၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်, သူ့ကိုငါသိ၏။ "
ဒီနေရာတွင်ကလောကချမ်းသာပေးနိုင်သောမခံမယူနိုင်သောပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနညျးတူယရှေုသညျလကျခံ!
သင်ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရရှိထားပြီးတာနဲ့ဒီတော့သင်ကတမန်တော်အခန်း2နဲ့ကျမ်းပိုဒ်4မှာကပြောပါတယ်အဖြစ်လျှာအတွက်စတင်စကားပြောဆိုနိုင်သည်
"ဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အမိနျ့ပေးတျောမူသကဲ့သို့, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်နှင့်အခြားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောစပြုသခဲ့ကြသည်။ "
အားလုံးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဘာသာစကားအားလုံးပြောဆိုရန်စတင်ခဲ့ကြသည်။ လျှာတခြားနေရာကမျြးစာတှငျကပြောပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတွက်ကျမ်းပိုဒ် 45 နဲ့ 46 အတွင်းဒသမမျြးအခနျးကွီး Acts:
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုလည်းတပါးအမြိုးသားအပေါ်သွန်းလောင်းခဲ့။ သူတို့လျှာနဲ့ကိုခြီးမှမျးဘုရားသခင်နှင့်အတူစကားကိုကွားသည်။ "
တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး 1 နှင့်ကျမ်းပိုဒ် 8 မှာ, ယရှေု says:
"ဒါပေမယ့်အခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သင်တို့အပေါ်သို့ကြွလာ, သင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌အပေါင်းတို့နှင့်တကွယုဒပြည်၌ရှိသောနှင့်ရှမာရိမြို့၌, မြေကြီးတိုင်အောင်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ "
ယေရှုခရစ်၌သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုအခြားသူများအားပြောပြပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး။ သင်, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအပြစ်မှလွှတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုပါပြီ။ အခြားသူတွေလည်းအတူတူပါပဲကြုံနေရကြပါစို့။
တမန်တော်အခနျးကွီး4နှင့်ကျမ်းပိုဒ် 20 ၌ဤအံ့သြဖွယ်ဝန်ခံ says:
ထိုအခါနောက်ပိုင်းတွင်ရှင်ပေါလုအမည်ရှိသောရှောလု, သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်, သူချက်ချင်းယေရှုအကြောင်းသူတို့ကိုသက်သေခံများနှင့်ပြောပြလာတယ်။ ဒီအကျိုးဆက်အဖြစ်သူကပိုပြီးပါဝါတယ်။ : သင်တမန်တော်မျြးအခနျးကွီး9နဲ့ကျမ်းပိုဒ် 22 ဖတ်နိုင်သည်
"ဒါပေမဲ့ရှောလုသည် ပို. ပို. ပါဝါဖြစ်လာခဲ့လျှင်, သူသညျယရှေုမေရှိယကိုကြောင်းကိုသက်သေပြအဖြစ်, ဒမာသက်မြို့၌နေသောယုဒလူတို့သည်လည်း။ "
ယေရှု၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ချက်များအတွက်ရပ်တည်တဲ့အခါမှာလူတွေကသင်တို့အဘို့အရိုသေလေးစားမှုရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျယရှေုမပြည့်စုံပြီ။
"စိတျနှလုံးအပြည့်အဝသည်အဘယ်အရာအားဖြင့်, ခံတွင်းပြော၏။ "
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ In-နိူးထိုကဲ့သို့သော၏ဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကသညျယရှေုကျမ်းပိုဒ် 45. အတွက်လုကာဆဋ္ဌမအခနျးတှငျအကပြောပါတယ် ဘောလုံး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုအတူကအကြောင်းပြောနေတာရှိသည်။ ကျနော်တို့မဆိုလမ်းထဲမှာအားထုတ်မှုစေပါဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်အတွက်စီးဆင်း။ အခုတော့သင်တန်း၏, ယရှေုသညျကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသွင်ပြောင်း။ ကျနော်တို့အခြားလူများကသူ့ကိုအကြောင်းကိုမပြောသင့်သလော
ဖြစ်ပျက်သမျှကို: ယေရှုအားအပေါ်ကိုင်ထား! ဘာမှမသင်သူ့ကိုစွန့်ခွာရမသွားပါစေပါနဲ့။ သူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုအကောင်းဆုံးအရာပါ!
သင်ကအရမ်းအဆုံးတိုင်အောင်အယေရှုနှင့်အတူကပ်ပါလိမ့်မယ်, သင် Li ကကောင်းကင်ထဲမှာပန်းဦးရစ်သရဖူကို vets ရလိမ့်မည်! ထိုယရှေုဗျာဒိတ်ကျမ်း3နှင့်ကျမ်းပိုဒ် 11 says:
"ငါသည်မကြာမီမည်။ အဘယ်သူမျှမသင်၏သရဖူကိုယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, သင်တိုအဘယ်အရာကိုကိုင်ထားပါ။ "